Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO : Faahfaahinta Dagaaladii ugu Dambeeyay ee Cadawga Lagu Naafeeyay
Xarunta Dhexe ee JWXO : Faahfaahinta Dagaaladii ugu Dambeeyay ee Cadawga Lagu Naafeeyay
Posted by ONA Admin	/ September 29, 2014
Wararka ugu dambeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaallo badan oo naftood hurayaasha CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ku dhex maray meela kala duwan oo dalka ka mid ah. Dagaaladan ayaa ciidanka wayaanaha loogu gaystay khasaare badan oo naf iyo maalba leh oo intooda badan aan dib kazoo ogaan doono faahfaahin dheeraad ah. Dagaaladaa ayaa ciidanka Wayaanaha lagaga gubay ugu yaraan 3ex gawaadhida ciidanka qaada oo halkaa ay ku bakhtiyeen ciidan badan oo la socday gawaadhidaa. Dagaaladaa ayaa waxay udhaceen sidan;
3/9/14 Laanyalax oo Dagmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa cadawga kudhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
8/9/14 Balbalaadh oo Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa ciidanka gumaysiga lagagagubay 1 baabuur oo kuwa dagaalka ah.
9/9/14 Xabaalo-jano oo Dagmada Dhanaan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada wayaanaha laga gaadhsiiyay khasaare aan wali lasoo faahfaahinin.
10/9/14 Naasahablood oo Dhanaan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 askari tiro aan lacayimina waa lagaga dhaawacay.
11/9/14 Haadaanta oo Galaalshe katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada daalan ee wayaanaha lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
12/9/14 Firdhiye oo Dhanaan katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/9/14 Birqod oo Gobolka Jarar katirsan mir habeenimo oo ay ciidanka xooga dalka Ogadenia ku qaadeen waxay kubur buriyeen fadhiisimo ay ciidanka cadawgu lahaayeen waxayna kugaadhsiiyeen khasaare naf iyo maalba leh.
22/9/14 Boodalay oo tuulada Galadiid ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 1 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/9/14 Labogarday oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal xoogan oo CWXO kuwa cadawga kudhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
22/9/14 Garigo’an oo Gobolka Nogob katirsan dagaal aad uwayn kadhacay waxaa ciidamada saamalaluudka ah ee gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aad ubadan oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
23/9/14 duleedka Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar kamiin ay CWXO kaxidheen waxay kugubeen 2 baabuur oo naaca ay ciidanka cadawgu qaataan ah waxaana kubaaba’ay dhamaan ciidankii wayaanaha ee saaraa.